I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-John
I-Mansion Terre Haute Family Bungalow yakhiwe kusukela phansi kuya phezulu ngemuva kokuthi ukulungiswa kuphenduke ukwakhiwa kabusha okuphelele. Woza ekhaya ku-bungalow ka-2018 enamagumbi okulala ama-3, amagumbi okugeza ayi-2.5, wonke afakwe ngobungcweti yiWest Elm. Kubiyelwe egcekeni, umpheme ongamamitha-skwele angama-250 ngemuva kwendlu, umpheme ongaphambili we-Ipe omuhle, nokunye. Igumbi lokulala le-Master linombhede wenkosi one-dresser, ama-nightstand amabili ase-West Elm, umatilasi we-memory foam, i-walk in closet, ne-en-suite yokugezela enezinto ezimbili eziyize kanye ne-65” yokuhamba ngeshawa.
Ikhaya laklanywa ngobungcweti futhi lahlinzekwa ngochwepheshe be-Mansion besebenzisa impahla yase-West Elm nesitayela se-Mansion. Jabulela ukuphila okunethezekile nge-WiFi esheshayo, imibhede enethezekile, ezinye izinto zokunethezeka ezansi kuwo wonke amagumbi, nezinsiza ongazilindela endaweni yezinkanyezi ezi-5.
4.90(108 okushiwo abanye)
Ikhelwe endaweni ethule futhi isekela inkundla evulekile engamahektha angu-8 kanye nesikole samabanga aphansi sezingane, leli khaya lisendaweni ekahle yokuthula nokuthula... nokho uhambo lwekhilomitha elinguhhafu ukuya egilosa, i-Starbucks, nokunye.
I-Mansion Community Manager yethu izotholakala njengoba kudingeka futhi njengenhlalayenza ungasebenzisa uhlelo lwethu lokusebenza noma imiyalezo ye-AirBnB ukuze usifinyelele 24/7